Arabia Saodita dia mampiasa vola amin'ny ho avy izao miaraka amin'ny hetsika ara-kolontsaina 100+
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Arabia Saodita » Arabia Saodita dia mampiasa vola amin'ny ho avy izao miaraka amin'ny hetsika ara-kolontsaina 100+
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Arabia Saodita ao amin'ny FII
Ao amin'ny Future Investment Initiative (FII) any Riyadh androany, ny Minisitry ny Kolontsaina, Andriamatoa Hamed bin Mohammed Fayez, dia nanasongadina lisitra mahavariana momba ny hetsika ara-kolontsaina 100 mahery, fifampiraharahana ary hetsika natao tao amin'ny Fanjakana alohan'ny faran'ny taona.
Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana mihetsiketsika sy miovaova ny hetsika maro notarihin’ireo andrim-panjakana kolontsaina miisa 25 natsangan’ny minisiteran’ny Kolontsaina hatramin’ny nananganana azy 3 taona lasa izay.
HE Fayez dia nilaza fa ny kolontsaina Saodiana dia mibaribary sy mahazo hery amin'ny ambaratonga sy ny hafainganam-pandeha tsy mbola nisy toy izany.
Ny fanirian'ny Fanjakana dia manolotra fahafahana maro ho an'ny sehatra tsy miankina eto an-toerana sy iraisam-pirenena.
“Fotoana mampientanentana ho an'ny kolontsaina ao Arabia Saodita izao. Amin'ny herinandro ho avy fotsiny dia hampiantrano ny fetiben'ny sarimihetsika iraisam-pirenena lehibe voalohany izahay, ny biennale kanto voalohany ary ny fetibe iraisam-pirenena toa ny Fashion Futures sy MDLBeast, "hoy i HE Fayez tao amin'ny ny FII. "Ireo hetsika ireo dia avy amin'ny fivoaran'ny Fanjakana tsy tapaka mba hikolokoloana ny famoronana sy hamoronana toe-karena ara-kolontsaina mavitrika ao amin'ny Fanjakana." Efa mandray anjara mavitrika amin'ny indostrian'ny famoronana manerantany i Arabia Saodita.
Ao anatin'ny famantarana hafa amin'ny fandrosoana haingana sy ny faniriana vaovao, ny Minisitera dia namolavola paikady izay hanokatra fahafahana vaovao amin'ny fampiasam-bola ara-kolontsaina amin'ny alàlan'ny PPP na fiaraha-miasa, hanamafisana ny fotodrafitrasa manodidina ny indostrian'ny famoronana, ary hanamora ny fampandehanana mba ahafahan'ny orinasa miroborobo. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana kolontsaina manerana ny Fanjakana, ny fiovana Faritra ara-kolontsaina Saodianaefa nahasarika ny mpampiasa vola iraisam-pirenena e.
Nanamarika haingana i HE Fayez fa tsy ny fampiroboroboana ny indostrian'ny famoronana ao anatin'ny Fanjakana ihany no andraikitry ny Minisitera fa ny fampitomboana sy fanatsarana ny kalitaon'ny fifanakalozana kolontsaina miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy maneran-tany ihany koa.
"Tena mirehareha aho fa ny Fanjakana dia nahomby tamin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny kolontsaina sy ny indostrian'ny famoronana mba ho tafiditra amin'ny resaka amin'ny G20," hoy i HE Fayez nandritra ny fifanakalozan-kevitra nataony. "Nanomboka nandritra ny fitondran'i Saodiana tamin'ny taon-dasa izany ary nitohy, izay midika fa nahazo antoka izahay fa manana toerana maharitra eo amin'ny G20 ny kolontsaina ary tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ara-toekarena manerantany."